जस्तै साइटहरु च्याट अनियमित
मुक्त छ तर आवश्यकता दर्ता गर्न एक प्रयास मा राख्न यस अनलाइन भिडियो च्याट साइट सफा गर्न । यदि तपाईं जस्तै पूरा गर्न नयाँ मित्र छन्, मजा लागि देख, वा तपाईं चाहनुहुन्छ एक अनलाइन मिति, यो सुरु गर्न एक राम्रो ठाँउ छ । समय मा हाम्रो परीक्षण, त्यहाँ थिए बारे प्रयोगकर्ता अनलाइन, साइट अनुसार. मुक्त छ तर आवश्यकता दर्ता गर्न एक प्रयास मा राख्न यस अनलाइन भिडियो च्याट साइट सफा गर्न । यदि तपाईं जस्तै नयाँ मित्र पूरा गर्न, मजा लागि देख, वा तपाईं चाहनुहुन्छ एक अनलाइन मिति, यो सुरु गर्न एक राम्रो ठाँउ छ । समय मा हाम्रो परीक्षण, त्यहाँ थिए बारे प्रयोगकर्ता अनलाइन, साइट अनुसार., एक रूसी उच्च विद्यालय विद्यार्थी, सिर्जना पहिलो अनलाइन अनियमित भिडियो च्याट वेबसाइट. मा सप्ताह को एक जोडी साइट बन्द गरे जस्तै एक रकेट र भए एक धेरै लोकप्रिय ठाँउ मान्छे को लागि बाहिर झुन्डियो. यो लोकप्रियता प्रेरित धेरै र विकल्प जस्तै फ्री च्याट अनियमित भिडियो च्याट र भिडियो डेटिङ.
यो वेबसाइट गर्न अनुमति दिन्छ एक-मा-एक वेब आधारित कुराकानी संग एक अनियमित व्यक्ति. मा कुनै पनि क्षण मा, तपाईं वा आगन्तुक तपाईं संग जोडी छन्, छोड्न सक्नुहुन्छ कुराकानी सुरु र एक नयाँ जडान संग एक नयाँ अनियमित आगन्तुक । वर्षौंदेखि राख्न संघर्ष साइट सफा राख्न र नाङ्गो मान्छे (ज्यादातर पुरुष) बाहिर । सबै प्रकारका उपाय प्रयास गरेका थिए तर अब देखिन्छ निकालेको संग दर्ता समाधान । यसको अर्थ हो, तपाईं गर्न सक्छन् छैन एक अज्ञात अनियमित भिडियो च्याट बिना दर्ता साइट मा. पहिलो समय तपाईं नेभिगेट च्याट भावनाहरु तपाईं संग प्रस्तुत गरिएको हो एक नम्बर को नियम, नियम र चेतावनी मुख्य पृष्ठ मा. तपाईं गर्न अनुमति छैन प्रसारण नग्नता वा अपमानजनक सामग्री र तपाईं छन् भन्दा हुन. यो पनि अनुमति छैन प्रसारण स्पाम वा नक्कली एक.
प्रयोग गरेर अनलाइन च्याट सेवा छ
तपाईं पालन गर्न सहमत नियम र छ सही गर्न ब्लक र तपाईं प्रतिबन्ध छैन भने तपाईं नियम पालन छैन । अन्तमा, एक चेतावनी दिइएको छ कि को वेब फिड तपाईं छन् प्रसारण गर्न सकिन्छ लिपिबद्ध गरेर अरूलाई त को लागि बाहिर घडी. तपाईं गर्न सक्छन् क्लिक ‘लग इन’ बटन मा मुख्य मेनु को यो फ्री वैकल्पिक लग-मा गर्ने हो भने तपाईं पहिले नै दर्ता वा मुक्त लागि साइन अप भने, तपाईं एक नयाँ प्रयोगकर्ता । प्रदान आफ्नो नाम, इमेल र पासवर्ड गाउँछन् गर्न । तपाईं एक पुष्टि इमेल प्राप्त हुनेछ र तपाईं क्लिक गर्न, लिंक मा यो पुष्टि गर्न आफ्नो दर्ता., -मा सुरु र आफ्नो अनियमित अनलाइन भिडियो च्याट साहसिक मा. मुख्य बटन मा शीर्ष मेनु हो ‘सुरु’, ‘स्टप’ र ‘रिपोर्ट र अर्को’ बटन. यी सबै बटन एक सर्टकट कुञ्जी कोड गर्न सक्छन् त तपाईं अर्को कोही छोएर बिना माउस । सबै विवरण भण्डारण छन्, ‘प्रोफाइल र सेटिङ’ प्यानल. यहाँ तपाईं सेट गर्न सक्नुहुन्छ अल प्रकारको विकल्प जस्तै वेब क्यामेरा र माइक्रोफोन प्राथमिकताहरू मा ‘अडियो र भिडियो’ खण्ड । आगत आफ्नो नाम, उमेर, लिङ्ग, स्थान, आफ्नो भाषा(हरू) र छोटो विवरण बारे आफैलाई मा ‘जानकारी’ ट्याब. वर्णन आफ्नो मनपर्ने संगीत, सिनेमा र खेल मा ‘स्वाद’ ट्याब. सेट केही प्राथमिकताहरू कसरी तपाईं चाहन्छु अर्को मान्छे ‘मा अर्को’ खण्ड । चयन यदि तपाईं हुनेछ जस्तै मान्छे भेट्न संग मात्र डाउनलोडर र चयन गर्न चाहनुहुन्छ भने जडान संग अपरिचित देखि विशिष्ट देशहरू «खोज». तपाईं अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी मा ‘खाता’ ट्याब. तपाईं पनि अपलोड केही फोटो मा ‘फोटो’ खण्ड मा प्रदर्शन गर्न तिनीहरूलाई सट्टा आफ्नो वेब फिड छ । पनि छ ‘प्रिमियम’ विकल्प । संग प्रिमियम विकल्प सक्षम पार्दा, तपाईं किन्न सक्छन् टोकन दिन भनेर तपाईं अतिरिक्त सुविधाहरु. उदाहरणका लागि, तपाईं चयन गर्न सक्छन् लिङ्ग को मान्छे तपाईं संग जोडिएको छन् भने तपाईं एक प्रिमियम खाता छ । अनलाइन अनियमित च्याट मा अनुभव सरल छ. तपाईं बस मारा ‘सुरु’ बटन र तपाईं संग जोडिएको छन् एक यादृच्छिक अपरिचित. ‘ जोडिएको या तपाईं नरमाइलो लाग्यो प्राप्त भने, तपाईं बस मारा ‘अर्को’ बटन. यो हुन छ भने च्याट भावनाहरु गरेको प्रयासमा राख्न साइट सफा बन्द तिर्न । अधिकांश समय तपाईं संग जोडिएको सभ्य गर्ने मान्छे बस मजा गर्न चाहनुहुन्छ वा एक राम्रो कुराकानी छ । एक पटक एक जबकि मा तपाईं प्राप्त हुनेछ जोडिएको कसैले देखाउने स्पष्ट यौन व्यवहार भने तर तपाईं रुचि छैन भनेर, तपाईं बस क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ‘रिपोर्ट र अर्को’ बटन. मिनेट को एक जोडी पछि वेबसाइट मा, दर्ता भरेर बाहिर आफ्नो टेलिफोन नम्बर छ । तपाईं त एक पाठ सन्देश पठाए संग एक प्रमाणिकरण कोड तपाईं प्रवेश गरेका छन् वेबसाइट मा. यस जस्तै देखिन्थ्यो एक धेरै कठोर प्रयास दर्ता गर्न सबै प्रयोगकर्ता र बनाउन गर्दैन साइट अज्ञात. एक राम्रो चंचल सुविधा साइट आर्किटेक्चर छ रेखाङ्कन विकल्प । बरु टाइप पाठ तपाईं पनि आकर्षित मा मुख्य. वास्तवमा, यो आगन्तुक तपाईं अनियमित जडान गर्न सक्छ के नै गर्न सक्छन् त तपाईं एक बनाउन सँगै काम सहयोगी कला को टुक्रा. वा बस मजा छ र एक हांसो छ सँगै । एक राम्रो र ज्यादातर सफा अनियमित भिडियो च्याट साइट सुरु गर्न आफ्नो अनलाइन च्याट. तर वास्तवमा छ कि दर्ता राख्न हुनेछ केही मानिसहरू साइट प्रयोग. भएको पुन पुष्टि तपाईं दर्ता गरेर पाठ सन्देश देखिन्छ र पक्कै तर्साउनु धेरै प्रयोगकर्ता यो प्रयोग अन्यथा राम्रो अनलाइन अनियमित च्याट सेवा